Ungakuthola kanjani okuningi ku-Izithombe ze-Google | Izindaba zamagajethi
Ungakuthola kanjani okuningi ku-Izithombe ze-Google
AmaVillamandos | | General
I-Google inenombolo enkulu yezicelo zayo etholakalayo ukulanda, hhayi ku-Android kuphela kodwa nakwamanye amapulatifomu. Izithombe zeGoogle Akungabazeki ukuthi ingenye yezindlela ezinhle kakhulu futhi eziwusizo kunazo zonke esinikeza zona, esivumela ukuthi sigcine zonke izithombe zethu efwini, mahhala, futhi zisivumele ukuthi sikwazi ukufinyelela ngokushesha kuzo zonke lezo zithombe ezivela kwamanye amadivayisi.
Baningi asebevele bengabasebenzisi abasebenzisa lolu hlelo lokusebenza, kepha noma ngabe uyalusebenzisa noma awukazami okwamanje, namhlanje sizokukhombisa kule ndatshana ungakuthola kanjani okuningi ku-Izithombe ze-Google. Uma uzilungiselele, khipha ipeni nephepha ngoba izeluleko esizokunikeza zona ziyathakazelisa kakhulu, futhi mhlawumbe kufanele uziqaphele.
1 Finyelela izithombe zakho kusuka kukhompyutha yakho
2 Isipele sezithombe zakho siyazenzakalela
3 Izithombe zeGoogle nokufana kwayo ku-Instagram
4 Ungakha futhi ama-movie, amakholaji kanye ne-GIF
5 Hlanganisa izithombe zakho zibe ama-albhamu
Finyelela izithombe zakho kusuka kukhompyutha yakho
Izithombe ze-Google uhlelo lokusebenza lwama-multiplatform esivumela ukuthi sibone izithombe esizithathayo nesizilayishayo kusuka kudivayisi yethu yeselula kumadivayisi ahlukahlukene. Phakathi kwazo kukhona ikhompyutha, lapho singabona khona noma yisiphi isithombe nevidiyo, futhi singazilanda ngaphandle kwenkinga.
Ngalokhu ungafinyelela ifayela le- inguqulo yewebhu yesevisi noma landa uhlelo lokusebenza lwedeskithophu. Kunoma ikuphi, ungasebenzisa zonke izinketho nemisebenzi etholakala kunguqulo ye-smartphone, kuphela esikrinini esikhudlwana, ngenzuzo lokhu okukushoyo.
Isipele sezithombe zakho siyazenzakalela
Ngokuya sisebenzisa umakhalekhukhwini wethu ngezinga elikhulu ukuthatha izithombe, sizilondoloze ngaphandle kokuhleleka okuningi, ezimweni eziningi. Ukugwema noma yikuphi ukulahleka ngaphakathi kwemfuhlumfuhlu yethu Izithombe ze-Google zenza isipele kuzo zonke izithombe zethu. Vele, kufanele sikhumbule ukuthi insizakalo ye-giant search ikwenza njalo lapho sivula uhlelo lokusebenza noma ukuthi siyilungisa ngesikhathi esithile nokuthi sixhunywe kwinethiwekhi ye-WiFi.
Ukuze ulungiselele le nketho, kufanele ufinyelele kuzilungiselelo zezithombe ze-Google bese ukhetha inketho "Dala isipele futhi uvumelanise". Khumbula ukuthi isikhala i-Google esisinikeza sona asikhawulelwanga, ngakho-ke kufanele unqume ukuthi iziphi izithombe ofuna ukuzisindisa futhi ikakhulukazi ukuthi ufuna zigcinwe kumuphi umgangatho.
Enye yezinzuzo ezinhle ze lesi sipele esizenzakalelayo ngukuthi uma, ngokwesibonelo, ulahlekelwa yidivayisi yakho yeselula ngesikhathi esithile, ngeke kudingeke wesabe ngokungakwazi ukubuyisa izithombe zakho, ngoba uzohlala unazo futhi ukulungele ukulanda nge-Izithombe ze-Google.
Izithombe zeGoogle nokufana kwayo ku-Instagram
I-Google ithole uhlelo lokusebenza lokuhlela izithombe esikhathini esithile esidlule Ixhunyiwe, ukuze sithuthukise Izithombe ze-Google futhi sengeze izinketho ezimbalwa ezisivumelayo hlela izithombe zethu. Okunye okuthakazelisa kakhulu ukuthi kungenzeka ukuthi ungeze izihlungi ezithombeni zethu, ngendlela efanayo ne-Instagram.
Vele kusuka kwinsizakalo yakwaGoogle singasika, sizungezise noma sikopishe izithombe, kepha futhi sengeza izihlungi. Ukuze wenze lokhu, vele uvule esinye sezithombe esizigcinile bese uqhafaza kusithonjana sokuhlela esivela ekhoneni eliphezulu kwesokudla bese ukhetha isihlungi esisithanda kakhulu.
Ungakha futhi ama-movie, amakholaji kanye ne-GIF
Ngaphandle kokungahle kubonakale ekuqaleni Izithombe ze-Google yisevisi esinikela ngezinketho eziningi, ezifaka ukudala ama-movie, amakholaji kanye ne-GIF, nokuthi abasebenzisi abaningi abazi ngisho nokuba khona kwayo.
Okokuqala, uma i-Google Izithombe ithola izithombe eziningi eziqhumayo, izokwenzela i-GIF. Umphumela ezimweni eziningi uvame ukuba muhle impela, yize kwezinye izikhathi futhi uma izithombe zinganembi njengoba kudingeka, akukuhle kakhulu. I-Collage ingenye yezindlela esingaqoqa ngayo izithombe, futhi namuhla kunzima ukuthola olunye uhlelo lokusebenza olubenza babe ngcono kune-Izithombe ze-Google.
Ekugcineni amafilimu asinikeza umbono ohlukile wezithombe zethu namavidiyo, futhi singakha ngokukhetha ubude besikhathi, izithombe namavidiyo esiwafakayo futhi sengeza nengoma ukudala ukwakheka okuhle. Vele, khumbula ukuthi uma ufaka okuqukethwe okuningi, isikhathi sokucubungula esizodingwa Izithombe ze-Google sizoba side kakhulu.
Hlanganisa izithombe zakho zibe ama-albhamu
Enye yezinketho ezithakazelisa kakhulu i-Google Photos esinikeza zona, noma okungenani ngokombono wami, yi- sibheka ukuthi sithatha isithombe ngasinye futhi lokho kusivumela ukuthi senze ama-albhamu ngokushesha okukhulu futhi ngaphandle kokusethulela izinkinga eziningi kakhulu.
Lokhu kusebenza kuchazwa kalula ngesibonelo. Ngiye eholidini esikhathini esifushane esedlule, ngethemba lokuphumula futhi ngithole izithombe ezizongezwa ezinkumbulweni zami ezinhle. Umphumela waba izithombe ezingaphezu kwezingu-1.000 XNUMX ezahlelwa Izithombe ze-Google kuma-albhamu ahlukahlukene ngokuya ngendawo yesithombe ngasinye esithathiwe.
Ngaphezu kwalokho, Izithombe ze-Google zizokwazi konke futhi uma ufika ekhaya ngemuva kweholide elithakazelisayo, kuzokhombisa ukuthi i-albhamu yakho isilungele ukubukwa, nazo zonke izithombe zilungile futhi nenani elikhulu lolwazi okungangabazeki ukuthi lizoba khona okunye okuwusizo kakhulu.
Isevisi yezithombe ze-Google ayisiniki nje kuphela ithuba lokudala ama-albhamu ngokususelwa ku-geolocation, kodwa futhi ngokuya ngezinye izici ongazihlola zona ngokufinyelela kuthebhu yama-albhamu ozowathola ezithombeni ze-Google.
Ngabe lawa macebiso namasu akusizile ukukhama insizakalo enhle kakhulu Izithombe ze-Google eziyiyona namuhla?. Sitshele uma kukhona amanye amathiphu owaziyo esikhaleni esigodliwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma kunoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi esikhona kuwo. Uma kuthakazelisa ngokwanele sizokungeza kule ndatshana ukuze abanye abasebenzisi bayisebenzise futhi bayisebenzise.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Ungakuthola kanjani okuningi ku-Izithombe ze-Google
Kuvele kungenzeka ukuthi kwenziwe amadrayivu anzima alingane ne-athomu